Fitsapana ho an'ny fitsaboana ny biby fiompy - BALLYA
Amineolaum serum Feline Kitapo fitsapana Quantitative proteinina
fSAA Fitsapana ho an'ny saka
Amyloid serum A (SAA) no proteinina mahery vaika indrindra amin'ny saka
Kitapo fanadinana CPV Ab
Ho an'ny Canine
Canine Parvovirus (CPV) dia an'ny fianakaviana Parvoviridae, parvovirus.
Kitapo fitsapana Quantitative CDV Ag
Virosy distemper canine (CDV) dia iray amin'ireo viriosy tranainy indrindra sy lehibe indrindra amin'ny klinika izay mamindra ny alika.
Kitapo fitsapana CPV Ag Quantitative
Canine parvovirus (antsoina koa hoe CPV, CPV2, na parvo) dia viriosy mifindra miantra indrindra amin'ny alika.
Kitapo fitsapana Quantitative cCRP
Ny proteinina mahery vaika lehibe amin'ny alika dia CRP (Proteinina C-reactive) ary SAA (amyumid A serum)
Fitsapana FPV Ag
Ho an'ny Cat
Fart parvovirus (FPV) dia ao amin'ny genus parvovirus ary mety hiteraka panleukopenia feline.
Momba ny fitsaboana ara-biby
Tanjon'ny fikarakarana ny biby
Satria ny biby fiompy dia ampahany amin'ny fiainantsika andavanandro sy ny ankohonantsika. Tsy vitan'ny hoe nomen'izy ireo fiaraha-miasa izahay, fa nomen'izy ireo fanohanana ara-pientanam-po koa, nampihena ny haavon'ny adin-tsaina, ny maha irery anay, ary nanampy anay hampitombo ny fiaraha-mientana ara-tsosialy ary hanatsara ny fahatokisan-tena ho an'ny ankizy sy ny fivoaran'ny fientanam-po. Noho izany dia anjarantsika ny miompy biby ny mikarakara ny biby fiompy ilaina. Ny fahasalaman'ny biby dia afaka manara-maso sy manakana ny biby tsy harary arak'izay azo atao. Tsy ny fiantohana ny fiarovana ny biby fiompy ihany no manome fiadanan-tsaina fanampiny antsika.
Drafitra fitsaboana tsara momba ny biby
Anisan'izany ny fitantanana sakafo isan'andro, ny famahanana, ny fitomboana ary ny fivoarana, ny lanjany, ny fanefitra vaksiny, ny deworming ary ny alika sy saka hafa.
Anisan'izany ny toedraharaha ara-tsaina, fihetsika mijoro, fanatanjahan-tena, hafanan'ny vatana, fisefoana ary famonoana。
Aretina biby sasany
Distemper canine (CD) dia aretina mamindra otrik'aretina mahery vaika izay mety hitranga amin'ny alika manerantany, ary ny valanaretina dia virus virus distemper (CDV). Amin'ny fisorohana ny CVD dia tsy maintsy dinihintsika lafin-javatra roa ny tsimatimanota sela ary tsimatimanota humoral.
Ny làlam-pifandraisana lehibe indrindra dia ny lalan-pisefoana, arahin'ny lalan-dra mandevon-kanina. Ny foetus dia mety ho voa amin'ny alàlan'ny sakana eo amin'ny placental, miteraka tsy fahatapahan-jaza ary miteraka fiterahana. Ny aretina dia mety hitranga mandritra ny taona, fa matetika amin'ny ririnina sy amin'ny fiandohan'ny lohataona. Tao anatin'izay taona faramparany izay, niaraka tamin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fiompiana alika, mifanakalo matetika ny alika ary tsy hita miharihary intsony ny vanim-potoanan'ny aretina.
Parvovirus amin'ny canine dia iray amin'ireo aretina mifindra mahery vaika izay mety hanimba ny alika. Hatramin'ny nahitana ilay virus dia niparitaka nanerana an'izao tontolo izao.
Aorian'ny alika salama dia voan'ny virus amin'ny alàlan'ny lalan-kanina, dia manafika karazana sela roa ity virus ity, ny iray dia sela epithelial ny tsinay ary ny iray hafa dia sela myocardial, izay mampiseho soritr'aretina gastrointestinal sy soritr'aretin'ny fivontosan'ny myocardial.
Ny alikaola indrindra dia ny alikaola indrindra amin'ny CPV, indrindra ny alika kely, ary mamindra dia be ary manana taham-pahafatesana be. Ny aretina dia mety hitranga mandritra ny taona, ary mitranga matetika amin'ny ririnina sy lohataona.
Fart parvovirus an'ny Parvovirus, izay mety hiteraka panleukopenia. Ny saka marary dia miavaka amin'ny fihenan'ny isan'ny sela fotsy ao amin'ny vatana, izay azo fantarina amin'ny fomba isan-karazany.
Virus mamaivay enteritis mamely, valanaretina pesta, valanaretina folaka panleukopenia (FPV) dia miavaka amin'ny aretina tazo mahery, mandoa, leukopenia mahery ary enteritis.
Fle panleukopenia vokatry ny FPV dia mety misy manerantany. Izy io dia noheverina ho iray amin'ireo aretina miteraka aretina ateraky ny saka any Eropa sy Amerika Avaratra.
Toro-marika momba ny fikarohana biby
C-reaktif proteinina (CRP) dia ilazana proteinina (proteinina mahery vaika) izay miakatra be ao anaty plasma rehefa voan'ny aretina ny vatana na simba ny sela. CRP dia afaka mampihetsika ny famenony sy manamafy ny phagocytosis an'ny sela phagositika mba hanana anjara toeran'ny fifehezana, amin'izay dia manala ireo microorganisma pathogenika izay manafika ny vatana sy ny fahasimbana, ny nekrosis, ary ny sela sela apoptotic, ary mitana andraikitra lehibe miaro amin'ny fizotran'ny hery voajanahary ny vatana.
Ny karazana aretina isan-karazany dia manana fiovan'ny CRP samihafa. Ny CRP amin'ny alika dia mora tohina amin'ny aretina, ary afaka miakatra haingana eo am-piandohan'ny aretina, taratry ny toe-javatra amin'ny fotoana mety. Ho fanampin'izany, ny fifantohan'ny CRP dia tsy misy fiantraikany amin'ny antibiotika sy ny hery fiarovana. Afaka manara-maso tsara ny fivoaran'ny aretina mandritra ny fitsaboana izy io, noho izany dia manana lanjany lehibe amin'ny famaritana klinika sy fitsaboana.
Amyloid serum A
Amyloid serum A (SAA) no proteinina lehibe indrindra amin'ny saka ary miraikitra amin'ny plasma avo-hakitroky lipoprotein (HDL). Ny fandalinana klinika ankehitriny dia mifantoka amin'ny karazana SAA mandritra ny valiny mahery vaika amin'ny aretina mamaivay.
Ny SAA dia manomboka mitombo eo amin'ny 6-8 ora aorian'ny aretin'ny otrikaretina sy ny bakteria, ary miakatra aloha kokoa, mihena haingana kokoa ary sitrana haingana kokoa mandritra ny fanasitranana, noho izany dia misy fihenan'ny rà avo kokoa noho ny ra tokana voalaza ao amin'ny famantarana ny otrikaretina bakteria sy virus tany am-boalohany. amin'ny saka Mahazatra ny mahazatra.
Matetika ny olona manirery indraindray, ary mety mila manao camouflage ny tenany amin'ny fiaraha-monina izy ireo. Na izany aza, ny biby fiompy foana no tena voajanahary sy tena izy. Ny biby dia mpiara-miasa mahatoky sy mahaliana. Ny biby dia efa lasa mpikambana ao amin'ny fianakavianay, ary adidintsika sy adidintsika ny miaro ny fahasalaman'izy ireo ara-batana. Ny fitsirihana ara-pahasalamana tsy tapaka momba ny biby dia afaka misoroka amin'ny fomba mahomby ireo aretina tsy ilaina ary mitsabo ireo loza mety hitranga amin'ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny fotoana mety. Ballya manome karazana kitapo fitsapana haingana ho an'ny aretina biby. Ny valin'ny fitsapana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny EU. Mora ny miasa, ary haingana sy marina.